Ejypta: Mbola any am-ponja ilay bilaogera Abu Fagr na dia eo aza ireo baiko famotsorana miisa valo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2019 4:41 GMT
Manana bilaogy antsoina hoe Wedna Ne3eesh (Te-hiaina izahay) i Fagr, mpikatroka Sinai sady mpanoratra tantara, manoratra momba ireo fitakiana sy ny fiainan'ireo Bedouins ao Sinai, ary ny zo maha-olom-pirenena takian'izy ireo koa izy.
Amin'izao fotoana izao, dia ao amin'ny tobin'ny polisy Al-Arish ao Sinai i Mos'ad Abu Fagar, afaka mitsidika azy matetika ny fianakaviany, araka ny voalaza ao amin'ny bilaoginy, izay ny vadiny indray no manoratra tsy tapaka ao. Mitantara ny fitsidihana nataon'ny vadiny sy ny zanany vavy, Ranad ny bilaogy.
Ny endrik'i Ranad no singa lehibe amin'ny fanentanana firaisankina amin'ity bilaogera Sinai ity. Niparitaka manerana ny tontolon'ny bilaogy Ejipsiana ny sarin'ny zanany vavy mihazona ny sarin'ny rainy, na sora-baventy mivaky hoe “Tiako hiverina hody i Dada“.